कहिले बन्छ बिग्रेको टेलिफोन?
07 Jan 2016 | 08:28am
भक्तपुर- महिला तथा बाल विकास कार्यालय सल्लाघारी भक्तपुरको बिग्रेको टेलिफोन झण्डै दुई हप्तापछाडि बुधबार मात्रै नेपाल टेलिकम भक्तपुर शाखाले मर्मत गरिदियो। पटक–पटकको मौखिक अनुरोध सुनुवाई नभएपछि महिला तथा बाल विकास कार्यालयले नेपाल टेलिकम भक्तपुर शाखाका नाममा मंगलबार लिखित अनुरोधपत्र नै पठायो।
१० दिनदेखि बन्द रहेको टेलिफोन बनाइदिन पटक–पटक मौखिक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको व्यहोरासहितको टेलिफोन मर्मतको पत्र कार्यालय प्रमुख नीलाकुमारी घिमिरेले टेलिकमलाई पठाइन्। त्यही लिखित अनुरोधपछि टेलिकमले मंगलबार मर्मत गरिदियो र टेलिफोन चल्यो। तर विडम्बना कार्यालयको अर्काे टेलिफोन फेरि त्यही दिनबाट बिग्रियो।
महिला तथा बाल विकास कार्यालयको मात्रै होइन, सूर्यविनायकका पृथ्वीकुमार प्रजापतिको टेलिफोन बिग्रेको पनि तीन महिना नाघिसकेको छ। टेलिकम भक्तपुरले भने यसलाई मर्मत गर्ने कुनै चासो देखाएको छैन। 'टेलिफोन मर्मत गर्न नेपाल टेलिकम दूधपाटी भक्तपुर धाउन थालेको पनि महिनौं भइसक्यो,' पीडित प्रजापतिले भने, 'तीन महिना बितिसक्दा पनि बनाइदिएका छैनन्।' महिला तथा बाल विकास कार्यालय, सामान्य ग्राहक पृथ्वीकुमारजस्तै हिजोआज बिग्रेको टेलिफोन बनाइदिन आग्रह गर्ने सेवाग्राही दिनदिनै आए पनि समस्या समाधान गर्न भने टेलिकमले कुनै चासो नदिएकोमा दुःख व्यक्त गरे।
महिला तथा बाल विकास कार्यालय सल्लाघारी भक्तपुरकी कार्यालय प्रमुख नीलाकुमारी घिमिरले पटक–पटकको आग्रहपछि पनि टेलिकमले टेलिफोन नबनाइदिंदा अफिसको काम पूरै ठप्प भएको सुनाइन्। टेलिफोनको अभावमा कार्यालयको सबै काम ठप्प हुँदा पनि टेलिफोन मर्मत गर्न टेलिकमले तदारुकता देखाएन,' कार्यालय प्रमुख घिमिरेले नागरिकसँग गुनासो गरिन्, 'व्यक्तिगत कामको लागि होइन, जनताको काम हुने र सरकारी कार्यालयको काममा त यसरी ढिलासुस्ती हुन्छ भने सामान्य व्यक्तिको काम कस्तो होला!'
टेलिफोन बिग्रिएपछि सम्पूर्ण सञ्चारका काम मात्रै नभई फ्याक्स पठाउने लगायतका सबै काम ठप्प भएको उनले सुनाइन्। आफ्नो कार्यालयमा सेवाग्राहीले फोन गर्दा घन्टी बज्ने तर नउठ्ने समस्या भएको उनले सुनाइन्। यसले कार्यालय नै बन्द भएको हो कि कार्यालय कर्मचारीविहीन भएको भनेर ग्राहकले गुनासो गरेको उनको भनाइ छ।
यसैगरी टेलिफोन ठाउँसारीका लागि महिनौं धाउँदा पनि काम नभएको रामबहादुर शिल्पकारले गुनासो गरे। 'जति अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाई हुँदैन, के भएको हो यस्तो?' उनले हैरानी व्यक्त गरे। आफ्नो निवेदनमाथि सुनुवाई नभएपछि टेलिकमकै गुनासो गर्ने नम्बरमा कयौं पटक गुनासो गर्दा पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको पीडा उनले पोखे।
भूकम्पपछि जिल्लाको टेलिफोन सेवा अझै अस्तव्यस्त छ। भूकम्पले घर लगायतका भौतिक संरचना ध्वस्त हुँदा टेलिफोनको समस्या चुलिएको हो। भूकम्पले ढालेका संरचनाका कारण तारको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। यही कारणले पनि धेरैको टेलिफोन अझै सुचारु हुन पाएको छैन। बारम्बारको आग्रहपछि पनि समाधान नभएपछि सयौं ग्राहक सेवाविहीन भएका छन्।
यता नेपाल टेलिकम भक्तपुर शाखा प्रमुख निरज वज्राचार्यले ग्राहकको गुनासोलाई सुनुवाई गरिरहेको दाबी गर्छन्। 'ग्राहकको गुनासोलाई गम्भीर रुपमा लिएर काम गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'सकेसम्म छिटोछरिटो काम सम्पन्न गर्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो तर पनि विशेष प्राविधिक कारणले केही ढिलाई भएको हुनसक्छ।' वज्राचार्यले त्यो 'विशेष' र 'प्राविधिक' कारण भने खुलाएनन्।